लोकप्रिय खेल ब्लग
पित्त थैलीको शल्यक्रिया पछि खेलकुदमा कहिले फर्कने?
श्रेणी: इक्विप 0
पित्त थैली हटाएपछि खेलकुद कहिले सुरु गर्ने? शल्यक्रिया पछि 15 दिन अघि थप तीव्र व्यायाम वा खेल अभ्यास गर्न सल्लाह दिइँदैन। रिकभरी हुनुपर्छ ...
५ वर्षपछि खेलकुद कसरी सुरु गर्ने ?
५ वर्ष रोकिएको खेलकुद कसरी सुचारु गर्ने ? खेलकुद गतिविधिको पुन: सुरुवात अनिवार्य रूपमा प्रगतिशील हुनुपर्छ: यो नरम गतिविधिहरू (साइकल चलाउने, हिड्ने) बाट सुरु गर्न आवश्यक छ, लगभग…
कसरी बिस्तारै खेल फेरि सुरु गर्ने?
आफैलाई हानि नगरी खेलकुद कसरी पुन: सुरु गर्ने? राम्रो संकल्प गर्नु र खेलकुद गतिविधि पुन: सुरु गर्नु राम्रो कुरा हो। तर गति कायम राख्नु भनेको...
महिनौं रोकिएको खेलकुद कसरी सुचारु गर्ने?
एक महिनापछि खेलकुद कसरी सुरु गर्ने? आफ्नो अभ्यास विविध। यदि तपाइँ हप्तामा3पटक जिम जानुहुन्छ, उदाहरण को लागी, ...
प्रश्न: खेलकुदमा फर्कन किन गाह्रो छ?
फेरि खेलकुद कसरी सुरु गर्ने? खेलकुद गतिविधिको पुन: शुरुवात अनिवार्य रूपमा प्रगतिशील हुनुपर्छ: यो नरम गतिविधिहरू (साइकल चलाउने, हिड्ने) बाट सुरु गर्न आवश्यक छ, लगभग3घण्टा प्रति ...
२ महिना बिदा पछि खेलकुद कसरी सुचारु गर्ने?
राम्रो खेलकुद रिकभरी कसरी गर्ने? शारीरिक मर्मतसम्भारको लागि तपाईले हरेक दिन 15 मिनेटको सानो सत्र धेरै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तिमी…
लामो विश्राम पछि खेलकुद कसरी सुरु गर्ने?
लामो समयसम्म शारीरिक निष्क्रियता पछि खेलकुद कसरी सुरु गर्ने? यहाँ तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न दस सुझावहरू छन्। तपाईंले सुरु गर्नु अघि आफैलाई सही प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। ... एक बनाउनुहोस् ...
१ महिना बिदा पछि खेलकुद कसरी सुचारु गर्ने? उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक फुटबल खेलाडी हुनुहुन्छ भने, एक खेल (तीव्रता) संग सीधा सुरु नगर्नुहोस्, केहि प्रशिक्षण सत्रहरु संगठित गर्नुहोस् ...
खेलकुद पछि दुखाइ कसरी बच्ने?
खेलकुद पछि कसरी दुखाइ नहुने? खेल पछि दुखाइबाट बच्नको लागि7सुझावहरू प्रशिक्षण अघि वार्म अप। पहिले र पछि आफ्नो मांसपेशी मालिस गर्नुहोस् ...
व्यायाम पछि दुखाइ कसरी रोक्न?
खेलकुद पछि दुखाइ कसरी बच्ने? खेल पछि दुखाइबाट बच्नको लागि7सुझावहरू प्रशिक्षण अघि वार्म अप। आफ्नो मांसपेशी मसाज, पहिले...
12... 2,297 अर्को
मेरो नाम एलन हो। मेरो खेलकुद ब्लगमा स्वागत छ। यहाँ पाठकले नवीनतम खेल समाचार, प्रतिस्पर्धा समीक्षा, एथलीट अन्तर्वार्ता, विश्व र युरोपेली च्याम्पियनशिपहरू फेला पार्नुहुनेछ। फुटबल, आइस हक्की, बास्केटबल र अन्य खेलकुद च्याम्पियनशिपहरू।
प्रायः सोधिने प्रश्न: रग्बीमा कसले जित्यो?
च्याम्पियन्स लिगमा कसरी भाग लिने?
सबै भन्दा राम्रो जवाफ: रग्बी प्रशिक्षण सुविधामा कसरी जाने?
राम्रो फुटबल प्लेमेकर कसरी बन्ने?
बारम्बार सोधिने प्रश्न: पुराना फुटबल खेलहरू कसरी समीक्षा गर्ने?
हक्की प्लेअफ रैंकिंगले कसरी काम गर्छ?
खेल खेल्दा जांघ कसरी बढ्ने छैन?
© २०२२ च्याम्पियनशिप
संपर्क | हाम्रो बारेमा | गोपनीयता र कुकीज नीति
अधिकार धारकहरू सावधान! सबै सामग्रीहरू सूचना र शैक्षिक उद्देश्यका लागि साइटमा कडाईका साथ पोस्ट गरिएका छन्! यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि सामग्री पोस्ट गर्दा तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ, सम्पर्क फारम मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस् र तपाइँको सामग्री हटाइनेछ!